Bane ဖြစ်လာရန်ရက်ပေါင်း ၁၀၀ + လမ်းကြောင်း (ပထမနှင့်နောက်ဆုံး post) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
100 နေ့ရက်များ Bane (ပထမနှင့်နောက်ဆုံး Post ကို) ဖြစ်လာမှ + Path ကို
BANE (ပထမနှင့်နောက်ဆုံး Post ကို) လာ 100 နေ့ရက်များ + PATH
မင်းငါ့ကိုပြန်ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာငါအမြဲတမ်းယုံတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေသောဤလှုံဆော်အားပေးမှုရေးသားချက်များလက်တဆုပ်စာကိုဖတ်ရသည်ကိုသတိရမိသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ၊ ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရေးပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုထိခိုက်ရင်တောင်ငါ့ရဲ့အလှည့်ပဲ။ အောက်မှာငါကြိုးစားခဲ့သမျှ၊ နည်းစနစ်တွေ၊ အတွေးတိုင်း၊ အကြံဥာဏ်တွေအားလုံးကိုလမ်းညွှန်ပေးပြီးဒီခက်ခဲတဲ့ခရီးကိုကူညီလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင်အားလုံးဖြစ်ပျက်လာလျှင်တောင်မှအကူအညီပေးရေးလက်သည်ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ မင်း ၁၀၀% သင်ပျက်ကွက်လျှင်သင်အမှားပါ။ မင်းအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေါင်းထည့်တာဟာမင်းရဲ့ဘုန်းတော်ပဲ။ ငါအမြဲတမ်းမှတ်မိဖို့ monolithic အောင်မြင်မှုကြောင်း add လိမ့်မယ်။ သင်၏ကလေးမာရသွန်ဆုဖလားများသည်လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်အတွက်ဆုလက်ခံခြင်းကဲ့သို့သောအပေါ်ယံသည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့ကလမ်းညွှန်သို့ delve မီ, မယ့်နောက်ထပ်စစ်မှန်သောလူသား၏ကြောင်းအယူအဆကိုမြှင့်တင်ရန်ခဏယူကြကုန်အံ့။ သငျသညျကျိန်းသေတိုင်းလမ်းညွှန်နဲ့ post ၌ဤစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီပါပြီလိမ့်မယ်, အဲဒါကတိုင်းတစ်ခုတည်း fuck ဆိုတဲ့အချိန်ထပ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လူတို့သညျအထဲက dieing နေကြသည်။ ကျနော်တို့ဖြစ်သုံးပါသောအရာကိုမရှိကြပေ။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏စွန်းစာရွက်များထဲမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုထဲကလွန်သွားမှီတိုင်အောင်, သင်၏ NUMMI NUM နှင့်အတူကစားခြင်း, ချွေး, ကျော် hunched, ရှိသမျှတက်ပုပ်, မှောင်မိုက်၌နောက်ကွယ်မှထိုင်နေကြတယ်။ သင်တစ်ဦးသည်လူဟူမူကား, သင်တစ်ဦးသက်မဲ့အရာဝတ္ထု impregnate စေကြသည်မဟုတ်! တကယ်တော့သင်ကပင်လူ့မဟုတ်; သင်တစ်ဦး sucker ၏အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤကြီးမားသော PMO ကုမ္ပဏီများမှဝင်ငွေရောက်စေဖို့သားကောင်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ သင်သည်ထိုသူများမှာ! အိပ်ရာထပါ! တကယ်တော့သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှု, သင့်တန်ဖိုးရှိ, သင်၏အချိန်, သင့်စွမ်းအင်ကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ငါ့အားစကားကိုနားမထောင်ကြဘူး, သင် left ဘာမျှမရှိသည်သည်အထိသင့်ရဲ့နေ့စဉ် Self-ချစ်ခင်လေးမြတ်။ ငါသည်ငါ့ခရီးစတင်မီငါကဲ့သို့သောအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
•ငါ့အဆွေခင်ပွန်းကွာမျောခဲ့ကြသည်။ ငါသည်ငါ့အခန်းထဲနှင့်အပျော်အပါးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုင်ဖို့ Hangouts အပ်
•ငါယေဘုယျလူ့ interaction ကနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုကြီးမားငွေပမာဏရှိခဲ့ပါတယ်။
•လူတိုင်းငါစိတ်ပိုင်းထွက် check လုပ်ထားခဲ့ပြောတယ်။ ငါတောင်ဗီဒီယိုထဲမှာငါ့ကိုတစေ့တစောင်းဖမ်းမိနှငျ့သငျငါ့မျက်မှောက်၌အလွတ်ပြူးကြည့်နိုင်။ အဘယ်သူမျှမအိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ အာကာသဗိုလ်လောင်းများ၏အဓိပ္ပာယ်။
•အဘယ်သူမျှမနေပါစေငါအိပ်ပျော်ဘယ်လောက် ENERGY, none ။ NOTHING ။ အားလုံးကို AT ။ အမြဲတမ်းပင်ပန်း။ ငါ့မျက်စိပေါ်တွင်အိတ်ဖြူဖပ်ဖြူရော, ဝက်ခြံများနှင့်ရေခန်းခြောက်။
•ငါ PMO စွဲခဲ့ရသည်။
•ငါ PMO သွေးဆောင် ED ရှိခဲ့ပါတယ်။
BANE Motherfuckin Batman TO သို့ PATH အမြဲဘယ်နေရာမှာထဲကထဲမှာသုတ်လာသောနှင့်သင့်မိန်းကလေးခိုးယူ, ကမမျှတဘူးပဲ! တကယ်တော့သူကပင်သူအမှားတွေကျူးလွန်ကြောင်းသနားစရာပြစ်မှုဆိုင်ရာသကဲ့သို့သင်တို့မြင်သည်, တစ်ဦးကအဓိကလူကြမ်းသကဲ့သို့သင်တို့ကိုမမွငျပါဘူး။ သူဟာချစ်စရာကောင်းရဲ့ချွန်ထက်ရဲ့, သူသည်ပလေးဘွိုင်သန်းကြွယ်သူဌေးပါပဲ။ သင်မည်သို့သူ့ကိုရိုက်နှက်နိုင်မလဲ? ဘယ်လို, အားနည်း, ဂျပိန်, ဝက်ခြံဖုံးလွှမ်းနိုင်သငျသညျတုန်လှုပ်ပင် Batman ကိုက်ညီနှင့်ထက်သာလွန်ဖို့နီးကပ်လာသလော ဒါဟာကျနော်တို့က Batman သတ်ရိုးရှင်းသောပါပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့ BANE ပါစေ။ 1) အဆိပ် (ပါဝါထောက်ပံ့ရေး): သင်ကထောက်ခံမှုများအတွက်အခြေစိုက်စခန်း, ဆွဲငင်အားတစ်ခုစင်တာ, သင်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရသည့်အခါထံမှအာဏာကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်တဲ့နေရာလိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏သူရဲဝိညာဉျကိုသက်ဝင်စေလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အဆိပ် (bane ရဲ့သွေးရည်ကြည်) လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်တစ်ဂါထာ, သင်ယုံကြည်စိတ်ချရတော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသင်တစ်ဦးအသံစာကို, ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ဗီဒီယို, မှတ်စုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏အသက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ခံရသောဆငျးရဲအကြောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြောပြအကြံပြုမဟုတ်ဘူး။ လက်ျာလူတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်မှာအားလုံးမည်သူမဆိုပြောပြကြဘူး။
ငါသည်သင်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်မည်သို့ဝေးသငျသညျလာကြပြီသင်သတိပေးမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကနေဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်များအတွက်အသံစာကိုအောင်အကြံပြုလိမ့်မယ်။ ငါရှိခဲ့တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးဂါထာ "ဘယ်သူ့ခက်ခဲတဲ့ခဲ့သလဲ ကျွန်မ? ခက်ခဲတဲ့ပေါ့ "နှင့်ငါနှုတ်၌မြှုတ်ခံခဲ့ရတူသောကြောင့်တံပိုးမှုတ်သောအခါသည်အထိငါထပ်ခါထပ်ခါပြောပါလိမ့်မယ်။ သင်ချင်တယ်ဆိုဂါထာရှိသည်နိုင်ပေမယ့်သင်ဖို့တစ်ခုခုဆိုလိုဖို့ရှိပါတယ်! ဒီအကြံပေးချက်ကို၏အရေးအပါဆုံးသောအဘို့ကိုသင်က test ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်း / power supply / အဆိပ်အမှန်တကယ်သင်တို့အဘို့အရာတစ်ခုခုမနှငျ့သငျဖို့လုံခြုံရေးရုံမှားယွင်းသောအသိမဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်ဘယ်လိုကြောင့်စမ်းသပ်ရန်သလဲ? သငျသညျ, ပေါ်လာမယ့်တစ်ဦးတတ်ပြီးခံစားရသည်သင်၏ဂါထာကိုသုံးပါ, သင်၏အသံစာကိုနားထောင်ရန်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်များ၏စိတ်ခွန်အားနိုး watch video, သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖို့စာတစ်စောင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ။ ဒါဟာလုံးဝသင့်ရဲ့တိုက်တွန်းဖျက်ပစ်မယ့်မ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့တိုက်တွန်းဖို့လာကြတယ်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှပိုကောင်း, ဤနည်းစနစ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
2) FOCUS: BANE ဟာ Batman ဖယ်ရှားပစ်ရန်တဦးတည်းရည်မှန်းချက်, ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာအရာအားလုံးထက်သို့သော်တဦးတည်းရည်မှန်းချက်ကိုအာရုံစိုက်မရခဲ့ပေ။ လူအတော်များများဟာတစ်ချိန်ကမှာမျိုးစုံရည်မှန်းချက်များပြုပါနှင့်ဘာမျှမပြီးစီးရရှိဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့အာရုံ, ဆုံးရှုံးတက်အဆုံးသတ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ (ငါမှထွက်အလုပ်လုပ်အကြံပြုမယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်ရှုပ်နေနှင့်ငြီးငွေ့သငျသညျစောငျ့ရှောစဉ်ကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်) __________ နှစ်ခုရည်မှန်းချက်များ, အေဟာ Batman (သင့် pmo စွဲ) Killing, B. အပေါ်အများဆုံးမှာအာရုံစိုက်ပါ။ အစီအစဉ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ကအာရုံစိုက်ပြီးတော့, နှစ်ဦးထက်ပိုမရှိပါ!
MULTIPLE angle FROM မှ Attack 3): BANE ဟာ Batman ကိုသတ်ဖို့အားလုံးကိုထောင့်ကနေဝင်ရ၏။ Batman မောနှင့်နောက်ကျောကွဲအဘို့အသီးမှည့်ခဲ့ချိန်အထိသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူနေမှုအတွက်သူ့ကို cornered ။ မျိုးစုံထောင့်ကနေသင့်ရဲ့စွဲတိုက်ခိုက်ရန်။ တစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်လျှင်ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ရန်, သင်သည်အစဉ်အ fuck ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ဘူး!
သင်သည်အမှုရောက်သောညအချိန်တွင် PMO စောင့်ရှောက်ခြင်းရှိပါက•, သင်အိပ်ဒါမှမဟုတ်သင်တကယ်ကိုလေးနက်လျှင်, သင့်မှာရှိတဲ့ Junk တစ်ခုသော့ခတ်မဝယ်မှီ, သငျသညျအတော်လေးစျေးပေါဘို့တအွန်လိုင်းရှာဖွေနိုင်သည် cardio ကြဘူး။
•သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခန်းထဲမှာ PMO, အဲဒီမှာအများဆုံးကအမြဲလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်နှင့်ပြန်သင်၏မူရင်းအရပ်မှသင့်ရဲ့ Laptop ကိုရွှေ့ဖို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်ရှိရာအခန်း၌သင်တို့၏လက်ပ်တော့ / ကွန်ပျူတာစားပွဲခုံရွှေ့ပါ။ ဒါဟာသင်ပုံမှန်အားကြည့်ရှုသောထိုဒေသတွင်ပပျောက်ဖို့သိသိသာသာကိုကူညီလိမ့်မယ်။
•နောက်ထပ်အစွန်အဖျားန်းကျင်ကသင်၏ပရိဘောဂပြောင်းလဲရန်နှင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုလုပ်သင့်နေရာ redecorate ရန်ဖြစ်ပါသည်သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနေရာအရပ်၌ရှိကြ၏ယုံကြည်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါနှစ်စဉ်အသစ်တခုအိပ်ဆောင်အတွက် switched သောအခါငါအသစ်တခုအရပျ၌အခါပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်သိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသတိပြုမိသည်။ အဆိုပါနေရာအသစ်ရေချိုးခန်းနဲ့တူသတ်မှတ်လတ်ဆတ်သော, စိတ်ကိုမပြုလုပ်သိသိသာသာ PMOing ထံမှသင်တို့ကိုတားဆီးပယ်ပေးသည်။
•အမြဲတမ်းနေပါစေသင်ထွက်မသွားချင်ကြဘူးသို့မဟုတ်လူများထိတ်လန်နေကြသည်ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတစ် Hangouts, မှလွဲ. ။ သင်တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေမျိုးတွင်စကားကိုင်ဖို့သင်ယူနိုင်လျှင်သင်တစ်ဦးအဆင်ပြေတဦးတည်းချဉ်းကပ်လာသောအခါ, သင်အများဆုံးရောင်စုံလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအားလုံးသငျသညျနေ့အဘို့သင်၏အလုပ်ကိုပြီးဆုံးပါပြီယူဆနေသည်။
•ဤတဦးတည်းငါသိမြင်သည်ကိုဧည့်လမ်းညွှန်ကနေဘုံဖျားဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် get ရှေ့မှာအစီအစဉ်လုပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ် fuck ဆိုတဲ့ခဲတံနှင့်စာရွက်သုံးပါနှင့်ထုတ်ရေး, ညာပါတယ်။ သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးဖြုန်းပိုအချိန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သငျ့စိတျလှည့်လည်လိမ့်မယ်, နှင့်ပိုပြီးသင် PMOing တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသာငါ့အကျောင်းရဲ့စာကြည့်တိုက်မှာငါ့ Laptop ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်တဲ့စည်းမျဉ်းတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ငါသည်ငါ့အိပ်ဆောင်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့ပါလျှင်ငါ၏အအခန်းဖော်ရှိခဲ့သည်သာအခါ, ငါအသုံးပြုရန်လိမ့်မယ်။ ကျွန်မ ပို. ပင်အရေးတကြီးအသုံးပြုခဲ့လျှင်, ငါက၎င်း၏ charger ကိုဘဲငါကကွန်ပျူတာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြံပြုချက်များအားလုံးသင်သည်သင်၏စွဲ၌သင်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဖြစ်ထိုးဖေါက်ခြင်းပေါက်တွေပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးတယ်။
•သင် / r / nofap သာကိုသွားမထားရင်အချိန်, reddit, imgur, iwastesomuchtime, etc တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမသွားပါစေနဲ့။ သငျသညျဖို့လိုအပျသညျ့အခါတောင်မှ nofap ဖြင့်သာကပေါ်သွားပါ။ သင်အမှန်တကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတောမသတ် nofap surfing စိတ်ကူးပါသလား ထောက်ခံမှုကိုရှာဖွေလုပ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ဘားတက်ဖြည့်ပြီးနောက် မှစ. loiter ပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့, သင့်လှုံ့ဆျောမှုဘား, သငျသညျနေ့စဉျ replenish ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရုံ showering တူသောသင်နေ့စဉ်လုပ်အကြံပြုသည်။
•သင့် PMO သတင်းရင်းမြစ် Block ။ သင်တစ်ဦး ipad / iphone သို့မဟုတ်အင်တာနက်နိုင်စွမ်းအခြားကိရိယာရှိပါကလုံးဝသင့်ရဲ့ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းပိတ်ဆို့နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရန်သင့်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်မေးကြည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးဝိဉာဉ် / ဟက်ကာ / လိမ်မာသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ပါလျှင် K9 နှင့်သင်၏အင်တာနက်ပိတ်ဆို့ခြင်း, အများကြီးကူညီပေးသည်။ ငါသိပ်အချိန် K9 အင်တာနက်ကိုယ်ရံတော်တစ်ဝှမ်းတစ်လမ်းရှာတွေ့ဖြုန်းသတိရပါ။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်အခါ, ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာ binged ။
• binge မနေပါနဲ့! စဉ်! သင်သည်သင်၏အလိုဆန္ဒများမှအရှုံးမပေးပါလျှင်တစ်ကြိမ်ထိုသို့ပြုကြ၏။ သို့ပြုလျှင်သင်၏အခန်းတစ်ခန်းထဲက fuck ဆိုတဲ့ရေချိုးပြီး run!
•အစဉ်အဆက် Edge မနေပါနဲ့! Edging nofap အကြောင်းကိုအလေးအနက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုလူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတစ်ခုခုလုပ်သောအခါ, မှာအားလုံးကောင်းစွာသို့မဟုတ်မကလုပ်ပါ။ ထိုသို့သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ သငျသညျ edging start လြှငျ, ချွတ်ပြီးစီးခြင်း, သင့်အမှားလက်ခံအပေါ်ရွှေ့ပါ။ ငါအရင်ကထက်တစ်ပင်ပိုကြီးတဲ့အပေါက်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့မှ edging အများအပြားအမှားများမှလမ်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သငျသညျလဲလျှင်•ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်ရိုက်နှက်မထားပါနဲ့။ နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်နှင့်အာရုံစိုက်နေဖို့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပြီးသားဆင်းရဲသောသူသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထား Battery ကိုမရကြဘူး။ ထရပ်များနှင့်မျက်နှာများတွင် Batman ကြောင်းလာကြတယ်။
• STOP စိုစွတ်သောအိပ်မက်အတင်းဖို့ကြိုးစားနေ။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက် worthlessly တစ်အိပ်ရာစာရွက်ပေါ်ထွက် shoot, သင်၏အမျိုးအနွယ်ကိုမစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၏သင်တန်းမိမိတို့အပေါ်ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်မှသူတို့ကိုအတင်းပါဘူး။
•ဖြေရှင်းသည်။ ဒါဟာ BANE ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုကြ၏။ NO ရှင်းပြချက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ BANE BE ။
•သောအခါအသင်သည်တတ်နိုင်ဖတ်ရန်။ စာအုပ်တစ်အုပ်။ မပေးဆောင်းပါးများ, ငရဲမပေးတောင်မှကိုယ့်ရေးသားခဲ့ရာ။ စာအုပ်များဖတ်ရန်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အာရုံပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
• Meditate5နံနက်ယံ၌အိပ်ရာထဲကမိနစ်နှင့်5မိနစ်အိပ်ရာထဲကသင်တို့အားအိပ်ရုံမီ။ ဒါဟာအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။
•သင့်အလုပ်ဘဝပေါ် မူတည်. , သင် / worklife သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း / ပညာရေး၏ထိပ်ပေါ်မှာဝါသနာအချိန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးကဝါသနာပိုက်ကွန် surfing သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းသို့မဟုတ်စာတိုပို့ကစားမပေးပါ။ သငျ့အိမျထဲက fuck ဆိုတဲ့ရယူပါ။ အခုပဲ။ အရွက်။ ဟုတ်သည်, ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုရပ်ရန်။ မိုက်သောသူသည်ပြေး။ ထွက်သွား။ ရှိပါတယ်လမ်းလျှောက်ပါး THE ဆုံး NATURE ဘို့အသွား။ NATURE BE, သဘာဝကြည့်ပါ, ပြီးနောက်အားလုံးသင် NATURE FROM မှထားကြပါတယ်! သင်တစ်ဦးကစက်မဟုတျပါ!
4) ရက်စက်မှုနှင့်မဆုတ်မနစ် BE: ဒရိုက်လို။ တိုင်းလူကြမ်းဟာ Batman သတ်ပစ်ချင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကမပါ drive ကိုရှိခဲ့တယ်နိုင်ဘူးလို့ပဲ။ လူတိုင်းငွေရတတ်ခြင်းလိုလူတိုင်းကဒီသို့မဟုတ်လိုလားပေမယ့်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှထိုသို့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ သငျသညျယဇျပူဇျောဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ဖို့ရှိသည်နှင့် 100 နေ့ရက်ကာလအဘို့အင်တာနက်စှနျ့ဆိုလိုတယ်လျှင်, အိုင်တီလုပျဆောငျ! သငျသညျကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားချင်ပါသလား? သငျသညျရှူချင်သကဲ့သို့သင်တို့မကောင်းတဲ့အဖြစ်ကချင်ပါသလား? သင် Bane ဟာ Batman သတ်ပစ်ချင်ခဲ့တယ်အဖြစ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ချင်ပါသလား သငျသညျကရြောကျခဲ့လျှင်, ထရရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးစောင့်ရှောက်လော့။ သင်၏မျက်နှာကိုအဲဒီ hits ယူ. ဖြည်းဖြည်းသူတို့ကိုကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်လာသည်။
5) စီမံကိန်းနှင့် adapter: BANE အဆိုပါလိမ္မာ Batman သူတို့ကို outsmarted encase လမ်းတစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းမှာမျိုးစုံဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူရှေ့ဦးစွာ မှစ. ရေတွင်းတစ်တွင်းသဘောပေါက်အစီအစဉ် strategized ။ ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ရေတွင်းတစ်တွင်းသဘောပေါက်အစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်စေ။ x ကဖြစ်ပျက်လျှင်, ငါက y ပြုလိမ့်မည်။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးတှေ့ရလြှငျ, အိုင်တီပြောင်းရွှေ့ရန်! ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်တယ်ဆိုရင်ကြောင်းလုပ်ဖို့ဆက်လက်။ ရှေ့ဦးစွာ မှစ. အစီအစဉ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ကပ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုရလဒ်များကိုရုံထဲမှာသွားသငျသညျထိုနေ့ရက်လုပ်နေတာနဲ့တူခံစားရသမျှကြွက်သားအုပ်စုကိုလုပ်နေတာမမြင်ရပါလိမ့်မယ်, ဘာမှအထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။
6) တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်နေ့စဉ်သေဆုံး: ယခု မှစ. , သင်သည်မည်သည့်ဒုတိယသေဆုံးစေခြင်းငှါမဆိုမိနစ်, မည်သည့်နေ့, မည်သည့်လတွင်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်နှစ်တွင်နားလည်ပါ။ သငျသညျသေသည်တိုင်အောင်အဤသည်မှာ fapping သွားကြဖို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ, ကတကယ်တော့အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဆိုလိုသည်။ သင်လုံးဝဘာမှသင်၏အသက်ကိုဖြုန်းသဘောပေါက်သေချင်ပါသလား တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အစဉ်မပြတ်ငါငါ Batman အသတ်ခံရပြီးမှငါသာဘဝကိုပျော်မွေ့နိုင်သောအတွေးအခေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အာရုံစိုက်နေဖို့ကူညီပေးသည်နေစဉ်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကဘဝအသကျရှငျထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း LIVE ။ သင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများဒါမှမဟုတ်ဘာနားထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂီတကစားခြင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံပန်းချီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကစားခြင်း, (fapping မဟုတ်) သင်ပျော်ရွှင်စေသည်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ ဒါဟာသင် fruitlessly အချိန်ကိုဖြုန်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အရေးပါအရာပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
7) ရောင်ပြန်ဟပ်: ကအပေါင်းတို့၏အဆုံးမှာသင် Batman ကိုသတ်သည့်အခါ။ သင်စွဲသို့ငုပ်စေသောပြဿနာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပျင်း, စိတ်ကျရောဂါ, အမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ, သငျသညျတဖနျကြောင်းခံစားမှုမှအရှုံးမပေးသို့မဟုတ်တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်ထိုသို့နှိပ်စက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေကြောင်းကိုငါသိ၏။ သင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုတဲ့အခိုက်, သင်အမှန်တကယ်အတူရေတွက်ပြီးမှတစ်ဦးအင်အားသုံးဖြစ်လာယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင် BANE ဖြစ်လာယခုအချိန်တွင်ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျွမ်းကျင်, သင်ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးရသောနိုင်ပါတယ်။
သင်ဤတစ်ခုလုံးကိုရှည်လမ်းညွှန်, ကောင်းစွာဂုဏ်ယူပါတယ်ကနေတဆင့်လုပ်ပါ။ ဤသည် bane ဖို့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တန်ခိုးအာနုဘော်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Batman သတ်ဖြတ်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင် Batman (သင့်စွဲ) ကိုသတ်ပြီးတာနဲ့အရာအားလုံးနေဆဲခက်ခဲတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုသင်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုအပေါ်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ကြောင့်, မသိနိုင်ဖြစ်ကာမရကြဘူး။ ဖြစ်, အလိုမရှိ, အလှယျကူသကျအတှကျဆန္ဒရှိမထားပါနဲ့။ မဆုတ်မနစ် Be နှငျ့သငျရှိသညျတိုင်းပြဿနာကိုင်တွယ်။ သငျသညျသဘာဝကြောင့် ကျော်လွန်. မဆိုရည်မှန်းချက်ကိုလိုက်ရန် willpower နှင့်ယုံကြည်မှု၏ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, တစ်ဦးကလက်ရှိတစ်နေ့လျှင် BANE ဖြစ်၏။ ငါအရမျးခစျြတျောမူသောအဆင်းလှသောရည်းစားရှိသည်။ အဘယ်သူသည် BANE LOVE နိုငျခဲ့သိတယ်? ငါ၏အမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူငါ၏အကြားဆက်ဆံရေးသံမဏိအဖြစ်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏စိတျကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားရနှင့်ယခုသည်အခြားအားနည်းသူရဲကောင်းများချိုး။ ငါသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးမှာမြေ၌သူ့ကိုသင်္ဂြိုဟ်အဖြစ်ဒီလမ်းညွှန်ဟာ Batman များအတွက်ခေါင်း၌ငါ၏နောက်ဆုံးလက်သည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကငါ့ကိုမနှောင့်အယှက်လိမ့်မယ်။
TL; DR: သင်ဖတ်မ Batman ဖြစ်ကြသည်။ ငါ bane ဖြစ်၏။ ကိုယ့်သင့်ရဲ့နောက်ကျောကိုဖဲ့။